Izivivinyo zabasizi bezokuphatha: Izeluleko ezi-5 zokudlula | Ukwakheka nezifundo
UMaite Nicuesa | 03/06/2021 23:19 | Ukuphikisana
Ukulungiselela ukuphikiswa kungenye yamaphrojekthi uchwepheshe angawahlola ngesikhathi esithile emsebenzini wakhe. Lokhu kuyinselelo ebangayo, kodwa-ke, ukuthola isikhundla unomphela kunikeza ithuba lokubona ngamehlo engqondo ukuzinza kwemisebenzi.
Umncintiswano uphakeme kwazise abaningi abazongenela ukhetho benza isivivinyo futhi bafaka isicelo sezindawo ezimbalwa. Izivivinyo zabasizi bezokuphatha zifunwa kakhulu. Ku-Training and Studies sikunikeza okhiye bokuphasa isivivinyo.
1 Funda ngokucophelela yonke i-ajenda
2 Sebenzisa amathuluzi awusizo ukutadisha
3 Ukuhlelwa kwezihloko
4 Buka isikhathi sokuhlolwa
5 Phumula kahle
Funda ngokucophelela yonke i-ajenda
Enye yezingcuphe zokulungiselela ukuphikisana nesikhathi esifushane ukunganikeli isikhala esidingekayo kunoma yikuphi okuqukethwe. Awekho amaqhinga omlingo okudlulisa abaphikisi ngokungazami. Ukutadisha kubalulekile, kepha ukuhlela okuhle nakho kubalulekile. Enye yezinhloso zakho kufanele kube lokhu: nikela isikhathi kuyo yonke i-ajenda. Sicela wazi ukuthi kungahle kube nokubuyekezwa kwezihloko zekholi entsha. Ngalesi sizathu, i-ajenda ekhethiwe kumele ihlale ingeyakamuva.
Sebenzisa amathuluzi awusizo ukutadisha
Isibonelo, amasu okutadisha ayizinto eziwusizo zokujulisa ulwazi. Yenza uhlu lwamasu ongawasebenzisa kule nqubo: ukudwebela, ukufunda ngokuzwakalayo, ukubuyekeza, imidwebo, ukucabangisisa ngezinto, ukubhala amanothi… Inqubo ngayinye igcwalisa ezinye. Uhlaka lusizo ngokukhethekile ekubuyekezweni. Ngokuboniswa kwemifanekiso namaphuzu asemqoka ungabeka imibono ehlukile maqondana.
Ungahlola nokuthi kungenzeka yini ukulungiselela izivivinyo zabasizi bezokuphatha ngosizo lwesikole. Uma kunjalo, thola ukuthi liphi iphesenti labafundi besikhungo esishiwoyo. Isikole esikhethekile, esinabachwepheshe abake baphasa iqembu eliphikisayo phambilini, singakuqondisa kule nqubo.
Ikhalenda lokufunda lingenye yezinsiza ezikusiza ukuhlela isikhathi. Amahora owanikela kokuqukethwe ngakunye kuzoncika, kakhulu, ezingeni lobunzima. Sincome ngaphambilini ukuthi ufunde yonke isilabhasi, kodwa ziqoqe izihloko ngezinga lobunzima.
Ngale ndlela, Ungaqala inqubo yokufunda yalokhu okuqukethwe okunenkinga ephakathi noma ephezulu. Shiya imibuzo okulula kuwe kuze kuphele le nqubo. Ngale ndlela, ngokuqala ngokuqukethwe okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, uzikhuthaza ngokunqoba izithiyo ohlangabezana nazo endleleni.
Buka isikhathi sokuhlolwa
Ukubona ngeso lengqondo usuku lokuphikisa kungakusiza ukuthi uzilungiselele ngokomqondo isikhathi sovivinyo. Phelezela lo msebenzi kanye nesipiliyoni sokuziyela mathupha imvelo okuzokwenziwa kuyo ukuhlolwa. Isibonelo, iya endaweni ukuze ubone indawo.
Ngale ndlela, ujwayela leyo ndawo futhi uthole ezinye zezici zayo.. Ukuphikisana kukuthatha ngqo kudlule indawo yakho yokududuza. Ngakho-ke, ngangokunokwenzeka, kuhle futhi ukuthi uthole ihange lalabo abaziwayo.
Njengoba ngaphambi kwengxoxo yomsebenzi kunconywa ukuthi ubheke imvelo eseduze, ungasidlulisela lesi sibonelo ohlakeni oluthile lwefayela le- izivivinyo zokuncintisana zomsizi wokuphatha.
Isifundo siyingxenye yephrojekthi yakho yesikhashana, sithatha indawo ekhethekile yesikhathi sakho. Kepha udinga ukunqamula phakathi kolunye usuku lweviki ukuqalisa lo msebenzi ngokugqugquzela okwengeziwe. Futhi, ngendlela efanayo, kuhle ukuthi ngosuku olwandulela isivivinyo ukujabulela ngokuthula, futhi ngaphandle kokufunda. Ukungabaza kungakhuphuka, njengomphumela wezinzwa ezijwayelekile eziholela osukwini lokuhlolwa, lapho ugxila ekubuyekezweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Ukuphikisana » Izivivinyo zabasizi bezokuphatha: Izeluleko ezi-5 zokudlula
Izincwadi ezi-5 zemfundo yokufunda ngemfundo yokufunda ehlobo